Moments leh saaxiibo 16
Miyaad rumaysan tahay cilmi ahaanshaha sida sayniska? Hadday saas tahay, intee le'eg ayey tahay in loo tixgeliyo sidii loola xiriiri lahaa nolosha dadka iyo danaha?
Haddii astrology tahay, markaa astrology waa saynis. Sida ereygu tilmaamayo, astrology waa sayniska xiddigaha. Waxaan aaminsanahay inay astrologydu tahay midda ugu weyn ee sayniska, laakiin waxaan sidoo kale aaminsanahay in kuwa ugu badan ee kahadlaya astrology, kuwaas oo horoscopes ama saadaaliya dhacdooyinka mustaqbalka, waxbadan ka garanaya dulucda guud ee qaar ka mid ah muuqaalka jireed ee astrology. . Waxaan aaminsanahay wax weyn oo ku saabsan astrology iyo wax aad u yar oo ku saabsan kuwa xiddigiska yaqaanno. Astrologerku waa midka yaqaan sharciyada xukumaya jiritaanka jaranjarada, gudashadooda gudaha iyo dibadaba, saamaynaha ka imanaya kuna hawl gala xubnahan laxiriira midba midka kale, iyo shuruucda xukuma oo xakameeya saameyntooda xiriir la leh midba midka kale iyo ficilkooda nin.
Astrologerku waa kan yaqaan waxaas oo dhan, laakiin astrologer ma aha kan ka hadla waxa uu yaqaan. Wuxuu ogyahay inuusan sii ahaan karayn xiddig-xiddig ama uga sheekeyn wixii dhacay ama hore u sii saadaalin kara una saadaalin kara dhacdooyinka soo socda, iyo, adeegga, inuu lacag helo. Xiddig xiddig, macnaha dhabta ah ee ereyga, waa inuu ka weynaaday waxyaabihii dunida oo uu ka sara maray adduunka si uu u noqdo xiddigaha iyo waxa loola jeedo 'xiddigood' ' run ahaantii lama yaqaan, xitaa kuwa raacsan ee sida saxda ah u ah sayniska sida cilmiga xiddigiska. Astronomy waxay la macaamilaan himilooyinka, weynaanta, masaafada iyo dastuurka jir ahaaneed ee unugyada jannada. Astrology waa sixirka ama sayniska qarsoon ee cilmiga xiddigiska. Waxaan aaminsanahay in qodobbada yar ee iftiinka leh ee aan ugu magac-darnayno cirka ay macno weyn noogu fadhido wixii loo yaqaan astronomer ama astrologer kasta, oo ku qora cinwaankaas, weligiis.
Xiddiguhu waxay la xidhiidhaan nolosha aadanaha iyo danaha ilaa iyo inta aan ka mahadcelin karno oo aan fahmi karno. Had iyo jeer waxay qaban doonaan xiisaha maanka aadanaha.
Maxay tahay sababta dhalashada adduunka ee jireed saamayn ku yeelatay maslaxadda maskaxda?
'Dhalashada' dhalashadu waxay muhiim u tahay mustaqbalka is-weydaarsiga maxaa yeelay wakhtigaas waxay ku jirtaa xaalad aad u muhiim ah, oo dhammaan aragtiyadii la helay waxay yeelan doonaan saameyn joogto ah. Wixii markaa ka dambeeya si fiican looma beddeli karo. Saameynta ka dhalanaysa waqtiga dhalashada waa inay saameyn gaar ah ku yeeshaan nolosha mustaqbalka maxaa yeeley saadaalinta saameynta waxay saameyn ku yeelan doontaa jirka astralka ah ee xasaasiga ah. Ka hor intuusan dunida soo gelin, jidhku wuxuu ku tiirsan yahay inuu naftiisa ku noolaado nolosha jireed ee waalidkeed. Waxay ku nooshahay adduunka oo kaliya wakiil. Waxay ku nooshahay adduun gudaheeda adduun jireed. Wali ma aysan neefsan afkeeda, taas oo ah bilowga noloshiisa madaxbannaan. Xilliga dhalashada jidhku waa ka go'ay waalidkiis mana sii neefsanayo wakiil ahaan, laakiin waxay ka soo jiidataa neeftiisa nafteeda waalidnimadeeda. Jidhku dib dambe ugama qarsado ama kama difaaco adduunka dibadiisa iyo saameynta jidhka hooyadeed; waxay ku nooshahay adduunka jidhkeeda, iyada oo aan la helin difaac kale ama dabool. Dhammaan saameynta markaa ku guuleysatey waqtigaas waxay si xamaasad leh u muujinayaan jirka astral-ka-dhasha, kaasoo markaa u eg filim nadiif ah ama saxan, oo diyaar u ah inuu helo dhammaan aragtiyaha iyo saameynta, oo loo geysto nolosha, xitaa sida jirka jirku yeelan karo qaado nabar ama sumad lagu soo qaaday nolosha hore. Sababtaas awgeed daqiiqada dhalashada ayaa muhiim ah oo saameyn doonta nolosha adduunka ka dib.
Sidee ayey dhalashadeeda u ogaaneysaa mid ka mid ah aayihiisa dunida?
In daqiiqada dhalashada ee dunida ay go'aamiso hal aayada aan aaminsanahay, laakiin in ay had iyo jeer go'aamiso aayaha aanaan rumeysneyn. Ujeeddada ayaa lagu go'aamiyaa dhalashada oo keliya marka qofku doonayo inuu u noolaado si sax ah iyadoo la raacayo xoojinta la helay xilligii dhalashada. Xilliga dhalashada jirka astral ee ilmuhu wuxuu u eg yahay saxan sawir oo si weyn loo dareemayo. Markiiba waxaa loo soo bandhigayaa dunida jireed saamayntooda hadda socda ayaa lagu soo qaatay. Neefsashada ugu horeysa ee ilmuhu waxay diiwaan gelisaa saameynta iyo dareenka uu ku yeesho jirka dareenka aadka u dareemaya, aragtiyahaasna waxaa lagu dhajiyay jirka astral ee ilmaha dhasha ah isla markaaba waxaa la helaa aragtiyo la helayo laguna xafidayo saxan sawir ah. Ku noolaanshaha si waafaqsan himilada hal qof ayaa ah sidaa daraadeed in la raaco talooyinka la soo jeediyay oo lagu noolaado si la mid ah aragtidiisa la helay xilligii dhalashada Muuqaalladaas waxaa lagu soo qaatay horumarka jirka iyo isticmaalka maanka. Muuqaalladaasi waxay ka muuqdaan asalka waxayna sawirradooda ku tuuraan maskaxda, maskaxduna waxay ku leedahay aayaheeda iyada oo ay u siiyeen sawirradan. Waxay, maskaxdu u dhaqmi kartaa iyada oo loo eegayo dareenka iyo soojeedimaha ka imanaya aragtiyaha ama waxa laga yaabaa in ay khariidad ka dhigaan dariiq aad uga duwan aragtiyadii la helay. Waxaas oo dhami waxay kuxiran yihiin maskaxda ama iswada, inay tahay mid kufilan isla markaana raba inuu shaqo ka qabto adduunka aan ahayn tan soojeedinta saameynta jinsiga.
Sidee ayay saameyn ugu yeelan kartaa dhalashada, ama mid ka mid ah aayihiisa, waxay la shaqeeyaan karma ee ego?
Karma waa natiijada waxa qofku ku fikiray ama qabtay; Waxa qof ku fikiray oo qabtay waa aayahiisa, laakiin ficilka iyo himiladu waxay khuseeyaan oo keliya wakhti cayiman. Muddada halkan lagu soo jeediyay waa cimri dhan. Ujeeddada, markaa, muddada, waa halmar karma muddada; muddadan waa nolosha jirka oo ku dhashay dunida. Fikradaha iyo ficillada hal qof oo nolosha ka mid ah ayaa keena oo keena shuruudaha nolosha dambe ee guulaha leh; Saamaynta uu ilmuhu ku yeeshay dhalashada ayaa ah astaamaha waxa qofku hore u soo qabtay iyo waxa laga yaabo inuu ka qabto waqtiga xaadirka ah. Waqtiga dhalashada, sidaa darteed, waa inuu ku soo beegmo oo la shaqeeyaa karma noloshaas, maxaa yeelay waa karma, ama natiijada ficilada.
Saameynta meeraha ma loo shaqeeyaa si loo maareeyo karma aadanaha, ama masiirka. Hadday haa tahay, xagee ayuu xor ka imaan karaa?
Haa, saameynta meeraha iyo dhammaan saameynta kale ee dhan waxaa loo isticmaalaa fulinta iyo go'aaminta masiirka. Laakiin xaqiiqada ninku waa wixii uu naftiisu u fidiyay. Muxuu yahay himilada uu hadda ku sugan yahay ma aqbali karo; si kastaba ha noqotee waa uu bixiyay oo ay tahay inuu aqbalo. Waxaa la dhihi karaa ninku ma bixin doono wax uusan jeclayn, sidaas darteedna, ma bixin doono masiirka uusan jeclayn. Diidmada noocan ahi waa mid indho-gaaban. Waxa ninku doorto ama u bixiyo naftiisa ama kuwa kaleba waa inay kuxirantahay kartidiisa xulashada iyo qaabkiisa uu ku bixin karo. Nin jaahiliin ah oo caqli badan, ama oday da 'yar oo liita, ayaa midkastaaba dooranaya oo bixin kara si ka duwan aqoonta iyo habkiisa. Waxa uu qofku doorto ama iskaga tuuro sidii wiil ahaan kaligiis looma qiimeyn karo sannadaha dambe, maxaa yeelay wiilku wuxuu ku koray da 'xagga aqoonta iyo qadarinta waxyaabaha, iyo caruusadda caruusadda ama caruusadda ayaa heley tixgelin aad u yar natiijadaas. Qofka u adeegsaday garsoor yar heshiis markuu galay, sikastaba wuu ku xidhan yahay qandaraaskiisa, si kastaba ha noqotee qoomamo badan oo qoomamo ah ayaa laga yaabaa inay tahay barashada nooca heshiiska. Waa laga yaabaa inuu mudaaharaado, laakiin mudaaharaadku kama joojinayso waajibka saaran. .
Mid kastoo wakhtigan xaadirka ah ama noloshii la soo dhaafay midkood ayaa qandaraas ku qaatay waxa uu ugu yeedhay mustaqbalkiisa. Kani waa karma uu isagu leeyahay, ama heshiiska uu isagu sameeyey. Waa uun. Xornimada qofku wuxuu kuxiran yahay waxa uu doonayo in uu sameeyo, ama waxa uu doonayo in uu helo, laakiin waxa uu go’aansado in uu sameyn doono. Ninka aaminka ahi xooggiisa kuma lumiyo qorshaynta sidii uu u burburin lahaa heshiis ama naftiisa uga bixi lahaa masuuliyadiisa. Ninkii daacadda ah naftiisuu naftiisa ugu dadaalaa sidii loo buuxiyo qandaraaskiisa ugana soo bixi lahaa mas'uuliyadiisa. Isla mar ahaantaana, haddii heshiiska ama mas'uuliyadaha uu u arko wax aan loo baahnayn ma sameyn doono qandaraas kale oo noocaas ah, kumana qasbanaan doono inuu isagu xilalkaas jeclaado. Qandaraasyada iyo mas'uuliyadaha noocaas ahi waa masiirka ama karma, oo qofku naftiisa u sameeyey.
Xornimadiisa ayaa imaaneysa goorta uu go’aansanayo sida uu ula tacaali doono masiirkiisa ama karma. Miyuu isku deyi doonaa inuu ka baxsado, mise wuxuu wajahayaa oo ka shaqeeyaa? Tanina waxay ku jirtaa rabitaankiisa xorta ah. Siduu u adeegsado doorashada, ayaa go'aan ka gaari doona mustaqbalkiisa mustaqbalkana wuu ku xirnaan doonaa sidii uu hadda ku xiran yahay.